Top 5 hộp cơm giữ nhiệt tốt nhất cho dân văn phòng năm 2022 | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 hộp cơm giữ nhiệt tốt nhất cho dân văn phòng năm 2022 | Muasalebang in Muasalebang
Wake waphathwa yikhanda elibuhlungu lapho uvuka ekuseni ukuze ulungiselele ukudla okumnandi, kodwa ngesikhathi sesidlo sasemini, “ucindezelekile” ngoba kumakhaza?
Njengesisebenzi sasehhovisi, ngiyawuqonda lowo muzwa. Ngakho-ke, namuhla ngizophakamisa amabhokisi ama-5 angcono kakhulu esidlo sasemini sabasebenzi basehhovisi ngo-2022 azokusiza ukuxazulula le nkinga.
1 Amabhokisi angu-5 angcono kakhulu esidlo sasemini
1.1 Khiya & Khiya ibhokisi lesidlo sasemini setha i-LHC8016S01
1.1.1 Ukubuyekeza okusheshayo Khiya & Khiya ibhokisi lesidlo sasemini isethi LHC8016S01
1.2 Elmich EL3144 thermos food container
1.2.1 Ukubuyekeza okusheshayo Elmich EL3144 thermos bottle
1.3 Zojirushi lunch box SL-GG18
1.3.1 Buyekeza ngokushesha ibhokisi lesidlo sasemini le-Zojirushi SL-GG18
1.4 Ibhokisi lesidlo sasemini le-JBG-2000 Thermos thermos
1.4.1 Ukubuyekeza okusheshayo i-JBG-2000 Thermos
1.5 I-Tiger lunch box LWU-F200
1.5.1 Ukubuyekeza okusheshayo Ibhokisi Lesidlo Sasemini se-Tiger LWU-F200
2 Ithebula lokulinganisa lamabhokisi angu-5 aphezulu esidlo sasemini esishisayo
3 Imibandela yokukhetha ibhokisi lesidlo sasemini esishisayo
3.1 1. Umthamo webhokisi lesidlo sasemini esishisayo
3.2 2. Izinto eziwumgogodla webhokisi lokudla ipulasitiki noma insimbi engagqwali
3.3 3. Inombolo yezingxenye zamabhokisi esidlo sasemini
3.4 4. Isikhathi sokugcina ukushisa
3.5 5. Libiza malini ibhokisi lesidlo sasemini se-thermos?
3.6 6. Isikhathi sewaranti yebhokisi lesidlo sasemini
3.7 7. Umsuka webhokisi lesidlo sasemini
3.8 8. Ungawathenga kuphi amabhokisi ekhwalithi, ukudla kwasemini ashibhile?
4 Iluphi uhlobo lwebhokisi lesidlo sasemini elishisayo okufanele ngiluthenge?
4.1 1. Khiya & Khiya ibhokisi lesidlo sasemini se-thermos
4.2 2. Zojirushi thermal lunch box
4.3 3. I-Thermos, ibhokisi lokudla
4.4 4. Elmich .i-thermal lunch box
4.5 5. Tiger thermal lunch box
5 Iluphi uhlobo lwebhokisi lokudla kwasemini elishisayo okufanele ngilukhethe?
5.1 Khiya & Khiya ibhokisi lesidlo sasemini setha i-LHC8016S01
6 Imibuzo ejwayelekile ukubuzwa
Amabhokisi angu-5 angcono kakhulu esidlo sasemini
Nawa amabhokisi esidlo sasemini e-thermos aphezulu angu-5 aphuma kumikhiqizo emikhulu ethi Lock&Lock, Elmich, Zojirushi, Thermos,… engiwancoma kuwe. Sicela uyihlole!
Xem Thêm Top 6 dầu gội thơm lâu được chị em yêu thích nhất hiện nay | Muasalebang
Khiya & Khiya ibhokisi lesidlo sasemini setha i-LHC8016S01
Ukubuyekeza okusheshayo Khiya & Khiya ibhokisi lesidlo sasemini isethi LHC8016S01
Kwenziwe ngezinto ezibonakalayo Insimbi engagqwaliikhono gcina ukushisa amahora angu-6-7.
Idizayini isivalo esingangeni elula futhi eqinile kakhulu ukugcina ukudla ebhokisini kugcinwe kahle, Akukho ukuchithwa noma ukuchitheka uma uhamba.
Futhi ikakhulukazi ibhokisi lenziwe ngensimbi engagqwali Ayikwazi ukusetshenziswa kuhhavini ye-microwave.
Insimbi engagqwali, ipulasitiki ye-PP kanye ne-Silicon gasket
280m – 420ml – 450ml Futhi 400ml
Ikhono lokugcina ukushisa
Elmich EL3144 thermos food container
Ukubuyekeza okusheshayo Elmich EL3144 thermos bottle
I-Elmich EL3144 isitsha sokudla se-thermos iwumugqa womkhiqizo omuhle webhokisi lesidlo sasemini Kushibhile.
Ikhwalithi ephezulu, impahla ephephile eyenziwe ngayo 304. insimbi engagqwali iphephile empilweni yabasebenzisi.
Ihlukaniswe 3 amagumbi ngamakhono ahlukene, elula Ingasetshenziselwa ukugcina ukudla noma njengebhodlela le-thermos.
304 insimbi engagqwali, BPA mahhala
270ml, 310ml kanye 670ml
Ihlala ishisa cishe amahora angu-6
Uphawu lokuhweba: Zojirushi
Zojirushi lunch box SL-GG18
Buyekeza ngokushesha ibhokisi lesidlo sasemini le-Zojirushi SL-GG18
I-Zojirushi SL-GG18-DB Lunch Box with design yesimanje. Izinto ezinganamatheli kulula ukuhlanza.
Imikhiqizo ihlanganisa 3 amagumbi U-u ohlukile onamandla ahlukene okuvimbela ukudla ukuthi kuhlanganiswe. Ifakwe a izinti ezimbili, isibambi sezinti nebhande elula kakhulu.
Isitsha: Insimbi engagqwali, Ikhabethe lelayisi: Ipulasitiki yekhwalithi ephezulu
Uphawu lokuhweba: I-Thermos
Ibhokisi lesidlo sasemini le-JBG-2000 Thermos thermos
Ukubuyekeza okusheshayo i-JBG-2000 Thermos
Idizayinelwe ngamabhande, ikusiza ingathwalwa noma igqokwe elula kakhulu. Ingasetshenziswa kumshini wokuwasha izitsha.
Imikhiqizo ihlanganisa Ibhokisi lerayisi eli-1, ibhokisi lesobho eli-1 kanye nebhokisi lokudla elingu-1 ngamavolumu ahlukene.
Kwenziwe insimbi engagqwaliqinisekisa ukuphepha kwezempilo.
Insimbi engagqwali, ipulasitiki ye-ABS
0.4 amalitha – 0.75 amalitha – 0.3 amalitha
Uphawu lokuhweba: Ingwe
I-Tiger lunch box LWU-F200
Kuyabiza uma kuqhathaniswa nomsebenzi
Ukubuyekeza okusheshayo Ibhokisi Lesidlo Sasemini se-Tiger LWU-F200
Kuhlanganiswe nomkhiqizo Ipheya eli-1 lezinti liza ngebhokisi elihlukile.
Imikhiqizo yenziwe Izinto zepulasitiki ze-PPI-BPA imahhala, iphephile empilweni.
Isivalo sebhokisi sakhelwe ukuthi sivalwe ngaso i-gasket yerabha yokulwa nokuchitheka .
Amabhokisi amancane angaphakathi anemilomo ebanzi ukukusiza cangakujabulela ngokuqondile ukudla ngaphandle kokudalula uma usebenzisa.
Ipulasitiki yekhwalithi ephezulu, iphephile empilweni
0.61L, 0.3L, 0.3L kanye no-0.27L
Cishe amahora angu-6
Ithebula lokulinganisa lamabhokisi angu-5 aphezulu esidlo sasemini esishisayo
Ungabona ezinye izindatshana ezihlobene:
Imibandela yokukhetha ibhokisi lesidlo sasemini esishisayo
Njengamanje, imakethe inezinhlobo eziningi zamabhokisi esidlo sasemini ashisayo anamanani ahlukene. Ngakho-ke, uma ufuna ukukhetha ibhokisi lesidlo sasemini elingcono kakhulu nelifaneleka kakhulu, kufanele usekelwe kulezi zindlela ezilandelayo:
1. Umthamo webhokisi lesidlo sasemini esishisayo
Kuye ngezidingo zakho, khetha ibhokisi lesidlo sasemini elinamandla afaneleka kakhulu. Ngokunjalo, ibhokisi lesidlo sasemini elinezingqimba eziningi, elinamagumbi amaningi eligcina ukushisa lizokusiza ukuthi ugcine ukudla okwengeziwe.
Buka Okuningi: Abapheki belayisi abahamba phambili abayi-10 bango-2020
2. Izinto eziwumgogodla webhokisi lokudla ipulasitiki noma insimbi engagqwali
Okubalulekile kwebhokisi lesidlo sasemini kuzothinta impilo yakho kanye nekhono lomkhiqizo lokugcina ukushisa.
Njengamanje, imikhiqizo yangempela yebhokisi lesidlo sasemini ye-thermos yenziwa ngezinto ezi-2 eziyisisekelo: 304 noma insimbi engagqwali kanye nepulasitiki ye-PP.
Kodwa-ke, kufanele ucabangele ngezinto lapho uthenga, qaphela ngemikhiqizo eshibhile ekhangisiwe!
3. Inombolo yezingxenye zamabhokisi esidlo sasemini
Njengamanje, kukhona amabhokisi esidlo sasemini anesendlalelo esingu-1 kanye namabhokisi esidlo sasemini anezendlalelo eziningi. Ngebhokisi le-thermos elinesendlalelo esingu-1 elincanyana ngosayizi, kulula ukuhlanganisa ukudla lapho ubeka ukudla.
Ibhokisi lesidlo sasemini lezendlalelo eziningi linomklamo olula nowesayensi. Ngenxa yalokho, ungakwazi ukuhlukanisa ngokucacile ukudla endaweni ngayinye ngaphandle kokwesaba ukuxutshwa ngesikhathi sokunyakaza.
4. Isikhathi sokugcina ukushisa
Ngokuya ngohlobo lwebhokisi, okokusebenza kuzoba nesikhathi esihlukile sokugcina ukushisa. Amanye amabhokisi esidlo sasemini e-thermos aphezulu angagcina ukushisa kufikela kumahora angu-8. Ngakho-ke, ilungele kakhulu abafundi, abasebenzi basehhovisi noma amapikiniki amabanga amade.
5. Libiza malini ibhokisi lesidlo sasemini se-thermos?
Intengo izohluka kuye ngohlobo lwebhokisi lesidlo sasemini. Imvamisa, intengo yokuthengisa yebhokisi lesidlo sasemini le-thermos iqala ukusuka Izinkulungwane ezingama-300 kuye kwezingu-2.5 million VND.
Ngakho-ke, kuye ngezidingo, izinjongo zokusetshenziswa kanye nezimo zomnotho ukukhetha kwesokudla thermal kwasemini ibhokisi umkhiqizo.
Ungabhekisela naku i imodeli yebhokisi lentengo emaphakathi nebanga ukusuka Izinkulungwane ezingama-400 – izinkulungwane ezingama-900 ze-VND ithusi. Imikhiqizo kuleli phuzu lentengo iyathengeka futhi iyikhwalithi.
6. Isikhathi sewaranti yebhokisi lesidlo sasemini
Njengamanje, imikhiqizo eminingi yemvelaphi engaziwa ithengiswa kabanzi emakethe ngesikhathi esifushane sewaranti, cishe izinyanga ezi-3 noma akukho siqinisekiso.
Ngakho-ke, lapho uthenga ibhokisi lesidlo sasemini le-thermos, kufanele ubheke imikhiqizo yangempela enewaranti encane yezinyanga eziyi-12 noma ngaphezulu ukuze uthole ukuthula kwengqondo.
7. Umsuka webhokisi lesidlo sasemini
Imikhiqizo yangempela ivela eJapan, Korea naseYurophu, enemikhiqizo edumile efana ne-Lock&Lock, Elmich, Zojirushi,,…. Ukuze ugweme ukuthenga ibhokisi lesidlo sasemini elisezingeni eliphansi, udinga ukuthola ngokucophelela lapho uthenga.
8. Ungawathenga kuphi amabhokisi ekhwalithi, ukudla kwasemini ashibhile?
Njengamanje, amabhokisi esidlo sasemini ashisayo athengiswa ezitolo eziningi, ama-ejenti kanye nezinhlelo zesuphamakethe ezweni lonke. Ungathenga kalula umkhiqizo webhokisi lesidlo sasemini we-thermos kunoma yisiphi isitolo sezinto zikagesi.
Uma uthenga ngokuqondile, ungaya ezitolo ezinkulu zikagesi noma ezindlini zombukiso zabakhiqizi ukuze uthenge imikhiqizo yangempela. Ngaphezu kwalokho, unga-oda kumasayithi ahlonishwayo e-e-commerce afana neTiki, Shopee, njll.
Iluphi uhlobo lwebhokisi lesidlo sasemini elishisayo okufanele ngiluthenge?
Emakethe namuhla, kunemikhiqizo eminingi yamabhokisi esidlo sasemini ashisayo abakhiqizi abaningi abahlukene njenge: Khiya & Khiya, Elmich, Zojirushi, I-Thermos… ziyimikhiqizo enedumela elihle, okufanele isetshenziswe.
1. Khiya & Khiya ibhokisi lesidlo sasemini se-thermos
I-Lock&Lock iwumkhiqizo odumile ekukhiqizweni kwemikhiqizo kagesi wasekhaya futhi I-Lock&Lock thermos lunch box ingumugqa womkhiqizo othandwa futhi owethenjwa abantu abaningi.
Ikhwalithi yale mikhiqizo ikalwe ngabasebenzisi njengehlala isikhathi eside uma iqhathaniswa nezinye izinhlobo eziningi, intengo ye-Lock & Lock amabhokisi esidlo sasemini ashisayo yinhle impela, kusukela ku- Izinkulungwane ezingama-300 – 1 million VND.
Ngaphandle komklamo omuhle, izinto ezisezingeni eliphezulu zenziwe ngensimbi engagqwali engu-304 noma insimbi engagqwali yezinga eliphezulu, ngakho ihlala isikhathi eside futhi iphephile empilweni.
Eminye imigqa ye-Khiya & Khiya amabhokisi esidlo sasemini ashisayo ongabhekisa kuwo yilena:: Khiya & Khiya LHC938, Khiya & Khiya LHC6170FU, Khiya & Khiya LHC8015,,….
2. Zojirushi thermal lunch box
I-Zojirushi iwuphawu lwempahla kagesi yasendlini edumile evela eJapan. Lona ngolunye lwemikhiqizo eyabeka isisekelo sobuchwepheshe be-vacuum insulation.
Eminye imigqa yemikhiqizo yamabhokisi esidlo sasemini esishisayo weZojirushi ongayibhekisa kuwo yilena:: Zojirushi ZOCM-SL-GG18-BD, Zojirushi SL-XD20-BA, Zojirushi ZOCM-SL-NC09-ST…..
3. I-Thermos, ibhokisi lokudla
I-Thermos iwuphawu oludumile lwesisetshenziswa sasekhaya esinomlando wamakhulu eminyaka. Imikhiqizo eshisayo yalolu mkhiqizo njengama-thermos flasks, amabhokisi esidlo sasemini e-thermos, njll.
Kodwa-ke, ibhokisi lesidlo sasemini elishisayo lale nkampani alinawo amamodeli amaningi abasebenzisi abangakhetha kuwo, intengo iphezulu impela, kusukela 1 million kuya ku-2.5 million dong.
Eminye imigqa yomkhiqizo webhokisi lesidlo sasemini ye-Thermos thermos yile:: Thermos 11400250, Thermos 11400252, Thermos 11400253, Thermos 11400255,…
4. Elmich .i-thermal lunch box
Olunye lwemikhiqizo edumile yase-Europe ye-thermal lunch box yi-Elmich. Imikhiqizo ye-thermal lunch box ka-Elmich nayo idume kakhulu kubasebenzisi.
Kwenziwe ngokuphelele ngezinto ezisezingeni eliphezulu, eziphephile, yonke imikhiqizo ihlolwe ngokuqinile ngekhwalithi futhi ungaqiniseka ngokuphelele lapho usebenzisa imikhiqizo yalolu hlobo.
Eminye imigqa yomkhiqizo evelele ye-Elmich ongabhekisela kuyo: Elmich EL0688, Elmich EL2355, Elmich EL3128, Elmich EL7284,….
5. Tiger thermal lunch box
Umugqa womkhiqizo we-thermal lunch box we-Tiger uhluke kakhulu ngedizayini, uhlobo nosayizi.
Intengo yale mikhiqizo nayo iphakathi nendawo, ngakho ifanele izinto eziningi.
Eminye yemigqa yemikhiqizo evelele yenkampani kufanele kuthiwe: Tiger LWR-A092, Tiger LWU-F200, Tiger LWU-B200, Tiger MCW-P071, Tiger MCW-P091.
Iluphi uhlobo lwebhokisi lokudla kwasemini elishisayo okufanele ngilukhethe?
Imikhiqizo engaphezulu emi-5 yamabhokisi esidlo sasemini yonke iyimikhiqizo yekhwalithi enhle, eqinisekisa ukuphepha. Mayelana nokugcina ukushisa, ikhwalithi kanye nenani, ibhokisi lesidlo sasemini lika-Khiya&Khiya i-LHC8016S01 liyisinqumo esinengqondo kuwe.
Ngebhokisi lesidlo sasemini eligcina ukushisa, izitsha ziqinisekisiwe ukuthi zifudumele futhi zimnandi. Idizayinelwe ukuthi iminyene, futhi ikwazi ukugcina ukushisa ukusuka emahoreni ayisi-6 kuye kwayi-7, ibhokisi lesidlo sasemini le-thermos liyinto ebaluleke kakhulu kubafundi noma abasebenzi basehhovisi. Ngakho-ke, ungakhetha kanjani ibhokisi lesidlo sasemini esihle, esiqinile. Ake sithole esihlokweni esingezansi!
Ungathenga amabhokisi esidlo sasemini esishisayo kumasistimu esitolo esikhulu njenge-Big C, i-Co-op Mart, njll. Noma kumawebhusayithi ezentengiso afana ne-Tiki, i-Lazada, i-Shopppe, njll.
Mayelana nokugcinwa kokushisa, ikhwalithi kanye nentengo, ibhodlela le-thermos le-Elmich EL3144 liyisinqumo esinengqondo kunazo zonke.
Ngethemba nge-athikili engenhla, ungazikhethela ibhokisi lesidlo sasemini esishisayo. Ngesikhathi esifanayo, kukusiza ukuthi ube nemibandela eyengeziwe yokukhetha ibhokisi lesidlo sasemini elifanelekile neliphephile lempilo yakho.
tương nén là gì? Cách làm tempeh bằng lò nướng đơn giản dễ làm | Muasalebang